Isahluko 78 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ngishilo ngaphambili ukuthi umsebenzi wenziwa Yimi, hhayi umuntu. Kimi, konke kukhululekile futhi kuyajabulisa, kodwa kini izinto zehluke kakhulu futhi noma yini eniyenzayo ilukhuni ngokwedlulele. Noma yini engiyivumayo ngokuqinisekile iyofezwa Yimi, lapho noma ngubani engimvumayo eyopheleliswa Yimi. Bantu—ningagxambukeli emsebenzini Wami! Konke enidinga ukukhathazeka ngakho ukulandela ukuhola Kwami, ukwenza engikuthandayo, ukulahla konke engikuzondayo, ukuzikhipha esonweni, nokuziphonsa ekusingatheni Kwami okunothando. Anginiqhosheli, futhi angenzi ihaba. Iqiniso ngempela linjalo. Uma ngithi ngizobhubhisa umhlaba, khona-ke ngokuphazima kweso, umhlaba uzophenduka umlotha. Nihlala nikhathazeke kakhulu futhi nengeza emthwalweni wenu, nesaba ngokujulile ukuthi amazwi Ami awanalutho, ngakho niyayaluza nizama ukungitholela “indlela elungile”. Niyizimpumputhe! Niyiziwula! Anazi ngisho ukubaluleka kwenu futhi nizama ukuba ngumeluleki Wami. Ngabe nibalulekile? Bukani kahle esibukweni!
Ake nginitshele! Abanovalo kufanele basolwe ngovalo lwabo, lapho abethembeke kakhulu bezothola izibusiso ngokholo lwabo. Ukucacisa, iphuzu elisemqoka kakhulu manje “ukholo.” Lapho izibusiso eziyonehlela zingakambulwa, nizodinga ukwenza konke eninakho ukuzikhandlela Mina ngalesi sikhathi. Lokhu okuthiwa “ukubusiswa” kanye “nokwehlelwa yinhlekelele” kubhekise kule ngxenye. Madodana Ami! Ngabe amazwi Ami asaqoshiwe ezinhliziyweni zenu? “Kulabo abazikhandlela Mina ngobuqotho, nakanjani ngiyonibusisa kakhulu.” Namuhla, ngabe niyiqonda ngempela incazelo ephakathi kuwo? Angikhulumi amazwi angenalutho; kusuka manje kuya phambili akukho okuzofihlakala. Lokhu kusho ukuthi izinto ebezifihlakele emazwini Ami ngaphambili manje zizotshelwa nina ngazinye, ngokungephikwe ngaphandle kokufihlwa. Okunye, lelo nalelo zwi liyoba ngumqondo Wami wangempela, kungasaphathwa ukuthi ukwambula bonke abantu, izigameko nezinto ebezifihlakele ngaphambili Kwami kuzokwenziwa kalula futhi ngeke kube lukhuni Kimi. Konke engikwenzayo kuqukethe ingxenye yobuntu Bami obejwayelekile, kanye futhi nengxenye yobunkulunkulu obuphelele. Ngabe ninokuqonda okucace ngempela ngala mazwi? Kungakho ngilokhu ngiphinda: Ningajahi kakhulu. Ukwambula umuntu noma into akulukhuni Kimi, futhi kuhlala kunesikhathi sakho. Akunjalo? Bangaki abantu osekudalulwe isimo sabo sangempela phambi Kwami njengomoya wempungushe, noma inja noma impisi? Wonke umuntu wambula isimo sakhe sangempela ngesikhathi esithile esibekwe Yimi, ngoba konke engikwenzayo kuyingxenye yohlelo Lwami. Ukuqonda kwenu kuleli phuzu kufanele kucace!
Ngabe uyakuqonda ngempela ukuthi “Isikhathi asikude kakhulu” kubhekiswe kuphi? Esikhathini esedlule, ubuhlala ucabanga ukuthi kubhekiswe osukwini Lwami, kodwa nonke benihumusha amazwi Ami ngesisekelo semiqondo yenu. Ake ngikutshele! Noma ngubani ohumusha amazwi Ami ngokungeyikho kusuka manje kuya phambili ngokungangabazeki ongenangqondo! Amazwi “Isikhathi asikude kakhulu” engiwakhulumile abhekise ezinsukwini zenu zokuthokozela izibusiso, okungukuthi, izinsuku lapho yonke imimoya emibi iyobhujiswa futhi ixoshwe ebandleni Lami, zonke izindlela zabantu zokwenza izinto ziyochithwa, futhi ngaphezu kwalokho abhekise ezinsukwini lapho zonke izinhlekelele ezinkulu ziyokwehla. Khumbula lokhu! Yizo “zonke izinhlekelele ezinkulu,” futhi ningabe nisakuqonda ngokungeyikho lokhu. Izinhlekelele Zami ezinkulu zizokwehlela phezu komhlaba wonke zisuka ezandleni Zami kanyekanye. Labo abazuze igama Lami bayobusiswa futhi nakanjani ngeke bathole lokhu kuhlupheka. Ngabe nisakhumbula? Niyacacelwa ngengikushilo? Isikhathi engikhuluma ngaso yisikhathi engiqala ngaso ukusebenza (izinhlekelele ezinkulu zifika ngalesi sikhathi). Aniziqondi ngokwempela izinhloso Zami. Ngabe niyaqonda ukuthi kungani ngibeka izimfuneko eziqine kangaka kini futhi ngingakhombisi luzwelo nhlobo kini? Lapho isimo samazwe omhlaba sishubile futhi (labo ababizwa ngokuthi) abasemandleni ngaphakathi eChina benza wonke amalungiselelo, futhi yisikhathi lapho ibhomu selizoqhuma khona. Labo abafuna indlela yangempela ezizweni eziyisikhombisa bayothutheleka ngokuzilahla amathambo eChina njengamanzi ephuma ezivalweni zedamu, kungakhathaleki ukuthi lingakanani inani lokukhokhwa. Abanye bakhethwa Yimi, abanye abokungenzela umsebenzi, kodwa akukho ndodana eyizibulo phakathi Kwabo. Lokhu ngukwenza Kwami! Lokhu kwenziwa lapho ngidala umhlaba. Lahla imiqondo yakho yobuntu. Ungacabangi ukuthi ngikhuluma umbhedo! Lokho engikucabangayo yilokho engikwenzile. Uhlelo Lwami futhi luyinto esengiyifezile. Uyacacelwa yilokhu?
Konke okwakho konke kuhleli emicabangweni nasohlelweni Lwami. Ndodana Yami! Ngikukhethe ngenxa yakho futhi ngaphezu kwalokho ngoba ngiyakuthanda. Noma ngubani olokotha angalaleli emcabangweni, noma abe nenhliziyo enomona, uyofa ngesiqalekiso Sami nangokusha. Lokhu kufaka izinqumo zokuphatha zombuso Wami ngoba umbuso namuhla usuvele wakhiwe. Kodwa ndodana Yami, kufanele uqaphele futhi akufanele ukuphathe lokhu njengohlobo lomnotho. Kufanele ucabangele inhliziyo kaBaba futhi, ngalokhu, wazise umzamo onesineke kaBaba. Kusuka kulokhu, indodana Yami kufanele iqonde ukuthi yiluphi uhlobo lomuntu engiluthanda kakhulu, yiluphi uhlobo lomuntu engiluthanda okwesibili, yiluphi uhlobo lomuntu engiluzonda kakhulu nokuthi yiluphi uhlobo lomuntu engilwenyanyayo. Ungalokhu wenezela ingcindezi kuwe. Noma yisiphi isimo onaso sonke salungiselelwa Yimi ngaphambili futhi siyisambulo sengxenye eyodwa yesimo Sami sobunkulunkulu. Lahla konke ukunganeliswa kwakho! Angikugodlele nzondo. Ngingakusho kanjani lokhu? Awukaqondi? Usathiywe wukwesaba Kwakho? Ngubani owethembekile, ngubani onentshisekelo, ngubani oqotho, ngubani onenkohliso—ngikwazi konke, ngoba njengoba ngishilo ngaphambili, ngazi isimo sabangcwele njengentende yesandla Sami.
Emehlweni Ami, konke kade kufeziwe futhi kwambulwa (NginguNkulunkulu ocubungula izinhliziyo zabantu eziphakathi kakhulu. Kungenxa yokukukhombisa nje ingxenye yobuntu Bami obejwayelekile, yilokho kuphela). Kodwa kini kufihlakele futhi akufeziwe. Lokhu konke kungenxa yokuthi aningazi. Konke kusezandleni Zami, konke kungaphansi kwezinyawo Zami, futhi amehlo Ami acubungula zonke izinto; ngubani ongaphunyuka ekwahluleleni Kwami? Bonke labo abangahlanzekile, labo abanezinto zokufihlwa, labo abahlulela ngemuva Kwami, labo abanokuphikisa ezinhliziyweni zabo, njalo njalo—bonke abantu abangabonakali njengegugu emehlweni Ami kufanele baguqe phambi Kwami bese bezethula imithwalo. Mhlawumbe emva kokuzwa lokhu, abanye abantu bayokhuthazeka kancane, lapho abanye ngeke bakholwe ukuthi kubaluleke ngale ndlela. Anginexwayise! Abahlakaniphile mabaphuthume baphenduke! Uma uyisiwula khona-ke linda nje! Bheka ukuthi ngubani oyokwehlelwa yinhlekelele lapho kufika isikhathi!
Izulu liseyizulu lokuqala futhi umhlaba usewumhlaba wokuqala, kodwa ngokubona Kwami izulu nomhlaba vele sekuguqukile futhi akuselona izulu nomhlaba okwake kwaba yikho. Izulu libhekise kuphi? Niyazi? Futhi izulu lanamuhla libhekise kuphi? Lalibhekise kuphi izulu langesikhathi esedlule? Ake ngikhulume ngalokhu kini: Izulu lesikhathi esedlule lalibhekise kuNkulunkulu enanikholwa Kuye kodwa owayengakaze abonwe muntu, futhi kwakunguNkulunkulu abantu ababekholwa kuye ngobuqotho obumsulwa (ngenxa yokuthi babengakwazi ukumbona), kanti izulu lanamuhla libhekise ebuntwini Bami obejwayelekile kanye nasebunkulunkulwini Bami obuphelele, okungukuthi, lo Nkulunkulu ongokoqobo Ngokwakhe. NguNkulunkulu ofanayo, ngakho kungani ngithi ngiyizulu elisha? Konke lokhu kuqondiswe emiqondweni yomuntu. Umhlaba wanamuhla ubhekise lapho nikhona. Umhlaba wesikhathi esedlule wawungenandawo eyodwa eyayingcwele, lapho izindawo enizihambayo zibekwa eceleni njengezingcwele, okungakho ngithi kungumhlaba omusha. “Omusha” lapha ubhekise “kongcwele.” Izulu nomhlaba okusha manje kufezwe ngokuphelele. Niyacacelwa yilokhu? Ngizokwambula zonke izimfihlakalo kini, ikhasi ngekhasi. Ningajahi, futhi izimfihlakalo ezinkulu ngokwengeziwe zizokwambulwa kini!